Jaamacadda Muqdishu Qaybta Bosaso ayaa Tababar u qabtay Ardayda Jaamacada[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Jaamacadda Muqdishu Qaybta Bosaso ayaa Tababar u qabtay Ardayda Jaamacada[Sawirro]
Jaamacadda Muqdisho Qaybta Bosaso ayaa tababar u qabatay ardayda ka qalinjabinaysa Jaamacadda sanad waxbarashadeedka 2014-2015.
Ardaydaan qalinjabinaysa ayaa ah dufcadii 4aad ee qaybta Bosaso (15aad guud ahaan jaamacadda).
Tababrkan ayaa soconayey 3 maalmood ujeedadiisa ay aheed sidii loo xoojin lahaa xiriirka u dhaxeeya ardayda qalinjabinaysa iyo Jaamacadda, sidoo kale sidii loo kobcinlahaa xirfadaha kala duwan ee ardayda.
Tababarkaan ayaa ardaydu ku qaateen casharo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen sida loo diyaarsado CV-yada, habka shaqooyinka loogu tartamo, astaamaha shaqsiga guulaystay iyo habka ay ardaydu ku abuuran karaan masharaariic ay ayagu leeyihiin,
Tababarkaan waxaa bixinayey barafasoorada Jaamacadda kuwaas oo si qurxoon ugu soo gudbiyey ardayda qalinjabinaysa duruus si heer sare ah loo soo diyaariyey, ardayduna ay si qurxoon uga qayb qaateen.
Ugu dambayn waxaa lagu soogabagabeeyey xaflad qurxoon oo ardayda tababarka loogu soo xerayo, laguna sagootinayo, shahaadooyina lagu gudoonsiiyey. Guud ahaan tababarkaan ayaa jawi qurxoon ku soo dhamaaday ardayda shucuurkooduna aad uyuu u sareeyey.